Sarkaal Al-Shabaab ah oo Duqeyn lala beegsaday & Wararkii ugu dambeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Sarkaal Al-Shabaab ah oo Duqeyn lala beegsaday & Wararkii ugu dambeyay
Sarkaal Al-Shabaab ah oo Duqeyn lala beegsaday & Wararkii ugu dambeyay
Saakow (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada dhexe ayaa sheegaya in duqeyn diyaaradeed oo khasaaro geystay ay ka dhacday degmadaasi.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in duqeyntaasi lala beegsaday Sarkaal Shabaab ah, sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan dowladda Federalka Soomaaliya.
Duqeyntaan ayaanan kala cadeyn inay fuliyeen Ciidamo Soomaali ah ama Ciidan Ajaanib ah, balse Saraakiisha dowladda waxa ay sheegeen bartilmaameedka inuu ahaay Sarkaal Al-Shabaab ah.
Ilaa iyo hadda lama hayo magaca Sarkaalka la beegsaday iyo xilka uu haayo, balse duqeynta oo maanta dhacday ayaanan jirin cid si rasmi ah faah faahin kaga bixisay.
Si kastaba ha’ahaatee, diyaarado dagaal ayaa duqeyn joogto ah waxa ay ka gaystaan deegaanno ka tirsan Jubbooyinka oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan, waxaana xilliyada qaar Al-Shabaab ka soo gaara khasaaro.
Duqeyn diyaaradeed oo khasaare ka dhashay
Duqeyn lagu dilay Sarkaal Shabaab ah